Arabia Saodita · Janoary, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Arabia Saodita · Janoary, 2011
Tantara mikasika ny Arabia Saodita tamin'ny Janoary, 2011
Jordania30 Janoary 2011
Bahrain24 Janoary 2011
Tontolo Arabo: “Atsaharo ny mitomany ho an'i Sodàna”
Amerika Avaratra24 Janoary 2011
Nametraka ny firenena ho eo ambanin'ny fanarahamason'ny tontolon'ny twitter Arabo ny fitsapan-kevi-bahoaka tany Sodàna mikasika ny fahaleovan-tena androany. Hatrany Arabia Saodita ka hatrany Palestina dia mandefa tweets mikasika ny firaisan'i Sodàna, ny fisarahana sy ny harena ny Arabo.
Tontolo Arabo: Aorian'i Tonizia, iza ny manaraka?
Ejipta16 Janoary 2011
Taorian'ny zava-nitranga tany Tonizia izay nanery ny filoha teo aloha Zine El Abidine Ben Ali handositra ny firenena, maro ireo mponin'ny aterineto avy amin'ny tontolo Arabo no manontany: "isika ve ny manaraka?"
Tontolo Arabo: Mifety ny fidarabohan'i Ben Ali
Bahrain15 Janoary 2011
Rehefa mijery ny Twitterfeed-ko, dia toa ny tsirairay no hihevitra fa efa ela ny tontolo Arabo no niandry ity andro ity. Niteraka koronana teo anivon'ny aterineto ireo Tweets nankalaza ny lositry ny filoha Toniziana Zine El Abidine Ben Ali avy tao Tonizia.
Arabia Saodita: Fandosirana, ny Filoha Tonisiana Teo Aloha Ben Ali Niantsona any Arabia Saodita
Tonizia15 Janoary 2011
Raha miparitaka be ny vaovao mikasika ny fandosiran'ny filoha Toniziana, dia tonga soa any Arabia Saodita i Zine El Abidine Ben Ali , ireo Saodiana mpampiasa twitter dia naka ity sehatra ity hanehoan-kevitra mikasika io raharaha io.